ပုရိသတွေအလိုလျောက်နားလည်ထားသင့်သည့် မိန်းကလေးများရဲ့စကားဝှက်များ – BaHuTuTa
January 1, 2021 admin Lifestyle, Love 0
ချစ်သူရှိတဲ့သူလား၊မရှိသေးတဲသူလား၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးတွေ ဘာပြောချင်လဲ နားလည်ရခက် နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ပြောတဲ့ စကားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆိုလိုချင်သလိုု တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းမူရင် ဆိုလိုရင်းအတိုုင်းယူရတာရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်တယ်လို့တော့ ဆင်ခြေမပေးနဲ့ပေါ့။ သင်ကကြိုက်မိတာကို အောက်မှာတော့ ကောင်မလေးတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားဝှက်လေးတွေကို ဗဟုသုုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သင့်ကို အလိမ္မာသုံးပြီး ရှောင်တာပါဘဲ။ ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တစ်တွေ လုပ်လိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင် ဒီလိုနည်းနဲ့ ရှောင်ဖယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကို သင်က အထာမနပ်ဘဲ ဟုတ်လား ခေါင်းကို်က်ရင် ဆေးခန်းသွားရမှာပေါ့၊ ဆေးသောက်လေ၊ ရေချိုးတာ ကြာလို့ဖြစ်မှာပါ-စသဖြင့် ဆက်ပြောမနေပါနဲ့။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သင် ဘာမှ မပြောရသေးဘဲ ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ တကယ်နေမကောင်းသလို ဖြစ်ချင်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပါ။
ဒီလိုမျိုးပြောလာရင်တော့ သင် ကံဆိုးပြီ။ အခြေအနေက သင်က သူ့ကို စပြီး ပိုးပန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီလို စကားမျိုး ပြောလာရင်တော့ သင် ငှက်ပျောခင်းစိုက်ဖို့ မြေဝယ်ထားပေတော့ 😛 ။ ဒီလို ပြောခြင်းဟာ သင့်ကို စိတ်မဝင်စားဘူးလို့အလိမ္မာသုံးပြီး ပြောတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် သူမမှာ တစ်ခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ယောက်ျားရှိတယ်လို့ ၀န်ခံတယ်ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။
3. ရှင့်ကို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။
ဒါလည်း ကိုယ့်လူ နာပြီ။ ဘယ်သူနေနေ ဒီစကားမျိုး ပြောခံရပြီဆို ကြက်နာကြီး လည်လိမ်လိုက်သလို ငိုက်ကြသွားတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နံပတ်(2)လိုတော့ ကံ အဆိုးကြီးမဟုတ်သေးပါဘူး။ သင် ချဉ်းကပ်တာ ပညာပါရင် ပါသလိုကောင်မလေးက သင့်ဘက်ကို ညွှတ်ယိမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့။
ဒါကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ စိတ်ကုန်တာကို ဖော်ကျူးတာပါ။ သင်နဲ့ အချစ်ရေးကို စိတ်ကုန်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ သင်နဲ့သူရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဒီထက်ပိုပြီး မတိုးတက်တာကိုလည်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကောက်ချက်ချရတာပါ။ သင်နဲ့ သူ ပြဿနာဖြစ်ရင် ဒါက လမ်းခွဲချင်ပြီလို့ ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ သင့်က အေးတိအေးစက်နိုင်လို့ သင့်ကို ယူပါတော့လို့ တိုက်တွန်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5. ရှင့်မိဘတွေနဲ့ ဘယ်တော့တွေ့ပေးမှာလဲ
ဒီစကားပြောရင်တော့ သင် သူ့ကို မိဘဆီ ခေါ်သွားရပါမယ်။ ဒီလိုမျိုးကျတော့ ကိုယ့်လူက အူတူတူ အတတ လုပ်မနေပါနဲ့။ဆွမ်းတော်ပွဲဆိုတာ လက်ဦးတဲ့ ကျောင်းသားနောက် ပါတတ်ပါတယ်။ သင့် ဆွမ်းတော်ပွဲကို ဘယ်သူမှ အကောက်မခံပါနဲ့။အင်း မိန်းမနဲ့ ဆွမ်းတော်ပွဲ ခိုင်းနှိုင်းရတာ ငရဲများ ကြီးနေမလားမသိ။ ဒါဆို သင့် ခြင်းထဲက ကြက်ကို သူများ ဟင်းအိုးမှာမမြင်ရပါစေနဲ့။ အဲဒီလို သူမကို အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး တစ်လက်စတည်း ခန်းဝင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆီကို သွားပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက် စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ ရပါပြီ-လို့။
အစား တစ်လုတ်ကြောင့် အသက် မဆုံးစေ ဖို့ ရှယ်ထား လိုက် တန်ဖိုး ရှိတယ်
မိန်းကလေးတွေ ဘာကြောင့် မိတ်ကပ် လိမ်းကြသလဲ